Charter maka ụwa na-enweghị ime ihe ike - World March
Mbido » Akwụkwọ ozi maka ụwa nke enweghị ike ime ihe ike
“Charter for a World Without Ime Ihe ike” bụ nsonaazụ nke ọrụ ọtụtụ afọ nke ndị mmadụ na ụlọ ọrụ nwetarala Nrite Nobel Peace. Edebere akwụkwọ nke mbụ na Summit nke asaa nke Nobel Laureates na 2006 ma kwadoro nke ikpeazụ na Summit nke asatọ na December 2007 na Rome. Echiche nke echiche na atụmatụ yiri nke anyị na-ahụ ebe a na March a.
11 nke November nke 2009, n'oge Nchịkọta Ụwa nke iri na Berlin, ndị mmeri nke Nobel Peace Prize ha gosipụtara Charter maka ụwa nke enweghị ihe ike ọ bụla nye ndị na-akwalite ọchịchị March ụwa maka Udo na Nkwụsịghị Ha ga-abụ ndị ozi nke akwụkwọ ahụ dịka akụkụ nke mgbalị ha iji mee ka mmụba zuru ụwa ọnụ mara banyere ime ihe ike. Silo, onye guzobere Universalist Humanism na mkpali maka World March, kwuru banyere Udo nke Udo na Nnoghaghi n'oge ahụ.
Ime ihe ike bụ ọrịa a na-atụ anya ya
Ọ dịghị steeti ma ọ bụ onye ọ bụla nwere ike ịdị nchebe na ụwa nke enweghị nchebe. Valueskpụrụ nke anaghị eme ihe ike akwụsịla ịbụ ihe ọzọ iji bụrụ ihe dị mkpa, na ebumnuche, dịka n'echiche na n'omume. A gosiputara ụkpụrụ ndị a na ngwa ha maka mmekọrịta dị n'etiti steeti, otu dị iche iche na ndị mmadụ n'otu n'otu. Anyị kwenyesiri ike na ịgbaso ụkpụrụ nke imeghị ihe ike ga-ewebata usoro ụwa nke ụwa mepere emepe na udo ọzọ, nke a ga-enweta gọọmentị nke ga-ekpe ikpe ziri ezi karịa karịa, na-akwanyere nsọpụrụ mmadụ na ịdị nsọ nke ndụ n'onwe ya.
Omenala anyị, akụkọ anyị na ndụ anyị na-agbakọ, omume anyị na-agakọ. Taa dịka ọ dịtụbeghị mbụ, anyị kwenyere na anyị na-eche eziokwu: nke anyị bụ akara aka. Ọ bụ ebumnuche anyị, mkpebi anyị na omume anyị ka a ga-ekpebi ọdịnihu ahụ.
Anyị kwenyesiri ike na ịmepụta ọdịbendị nke udo na nke na-abụghị ime ihe ike bụ ihe mgbaru ọsọ magburu onwe ya dị mkpa, ọ bụrụgodị na ọ bụ usoro siri ike ma sie ike. Ikwenye na ụkpụrụ ndị a kwadoro n'Akwụkwọ a bụ nzọụkwụ dị oke mkpa iji mee ka e nwee ndu na mmepe nke ụmụ mmadụ ma nweta ụwa n'enweghị ihe ike. Anyị, ndị mmadụ na òtù dị iche iche nyere onyinye Nobel Peace,
Na-ekwusi ike ntinye aka anyị na Nkwupụta Ụwa Nile Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ,
Nchegbu n'ihi na ọ dị mkpa ka ọ kwụsị njedebe nke ime ihe ike na mpaghara ọ bụla nke ọha mmadụ, ma, karịa nke ahụ, na egwu ndị na-eyi ụwa egwu n'ezie ịdị adị nke mmadụ;
Na-ekwusi ike nnwere onwe nke echiche na nkwupụta dị na mgbọrọgwụ nke ochichi onye kwuo uche na ihe okike;
Ịmata na ime ihe ike na-egosipụta na ọtụtụ ụzọ, ma dị ka agha, agha na-arụ, ịda ogbenye, akụ na ụba na-erigbu, gburugburu ebe obibi na mbibi, nrụrụ aka na ajọ mbunobi dabeere na agbụrụ, okpukpe, okike ma ọ bụ mmekọahụ nghazi;
Idozi na ime ka ime ihe ike, dị ka e gosipụtara site na ahia ntụrụndụ, nwere ike inye aka na ịnakwere ime ihe ike dịka ọnọdụ kwesịrị ekwesị na nke a na-anabata;
Ekwenyesiri ike na ndị kasị emetụta ihe ike bụ ndị na-esighị ike na kachasị ike;
Na-echeba udo abughi nani ime ihe ike kamakwa ikpe nke ikpe ziri ezi na ọdịmma nke ndi mmadu;
Ịtụle na enweghi ike ịmata ọdịiche dị iche iche agbụrụ, omenala na okpukpe dị n'akụkụ nke United States bụ ihe kpatara ọtụtụ ihe ike dị n'ụwa;
Ịmata ngwa ngwa nke imepụta ụzọ ọzọ maka nchekwa mkpokọta dabere na usoro nke na mba, ma ọ bụ otu mba, enweghị ngwaagha nuklia maka nchekwa nke ya;
Mara na ụwa chọrọ usoro zuru ụwa ọnụ zuru oke na omume ndị na-adịghị eme ihe ike nke igbochi mgbochi na mkpebi, nakwa na ihe ndị a na-enwe ihe ịga nke ọma mgbe a nakweere ha n'oge mbụ;
Na-ekwenye na ndị nwere onyinye nke ikike nwere ibu ọrụ kachasị mkpa ịkwụsị ime ihe ike, n'ebe ọ bụla ọ na-egosipụta onwe ya, na igbochi ya mgbe o kwere omume;
Ekwenyesiri ike na ụkpụrụ nke ndị na-adịghị eme ihe ike aghaghị inwe mmeri n'ọkwá nile nke ọha mmadụ, nakwa dịka mmekọrịta dị n'etiti mba na ndị mmadụ n'otu n'otu;
Anyị na-akpọ mba ndị ọzọ ka ha nwee ike ịkwalite mmepe nke ụkpụrụ ndị a:
N'ime ụwa na-emekọ ọnụ, igbochi na ịkwụsị agha agha n'etiti States na n'ime United States chọrọ imekọ ihe ọnụ n'akụkụ mba ụwa. Ụzọ kachasị mma iji hụ na nchekwa nke ọnọdụ ọ bụla bụ ịkwalite nchebe mmadụ zuru ụwa ọnụ. Nke a choro iwusi ike mmejuputa usoro UN na nke ndi otu oru aka.
Iji nweta ụwa n'enweghị ihe ike, ndị States aghaghị ịkwanyere iwu iwu mgbe nile ma kwanyere nkwenye iwu ha ùgwù.
O di nkpa ka iga n'ihu n'enweghi ike ichota ihe ndi agha nuklia na ihe ndi ozo nke mbibi. Mba ndị nwere ngwá agha ndị dị otú ahụ aghaghị ime ihe ga-eme ka ha ghara ịlụ agha na ịnweta usoro nchebe nke na-adabereghị na nuklia. N'otu oge ahụ, ndị United States aghaghị ịgbalị ime ka usoro ọchịchị nuklia na-agbasaghị, na-emekwa ka nkwenye dị iche iche kwadoro, ichebe ihe nuklia na ịme nkpu agha.
Iji belata ime ihe ike n'etiti ọha mmadụ, a ghaghị belata ma mepụta obere ngwá agha na ngwá agha ọkụ dị iche iche na-achịkwa mba, steeti, mpaghara na mpaghara. Tụkwasị na nke a, ọ ghaghị inwe nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ na nkwekọrịta nke mba ụwa na nkwarụ, dị ka 1997 Mine Ban Treaty, na nkwado nke mgbalị ọhụrụ iji gbasaa mmetụta nke ngwá agha ndị na-enweghị isi ma rụọ ọrụ ndị agha, dị ka ụyọkọ ndị agha ụyọkọ kpakpando.
A pụghị ịkatọ iyi ọha egwu, n'ihi na ime ihe ike site na ime ihe ike na n'ihi na ọ dịghị ihe egwu ọ bụla nke ndị bi n'obodo ọ bụla nwere ike ịme n'aha aha ọ bụla. Otú ọ dị, ịlụ ọgụ megide iyi ọha egwu enweghị ike ime ka o doo anya na e mebiri ihe ndị ruuru mmadụ, iwu ndị mmadụ na-ahụ maka ọdịmma ụwa, ụkpụrụ nke ọha na eze na ọchịchị onye kwuo uche ya.
Endkwụsị ime ihe ike nke ezinụlọ na nke ezinụlọ chọrọ nkwanye ùgwù na-enweghị atụ maka ịha nhatanha, nnwere onwe, ugwu na ikike ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke na ụmụaka, n'akụkụ ndị mmadụ niile na ụlọ ọrụ nke steeti, okpukperechi na ndi obodo. Ekwesịrị itinye ụdị nlekọta dị otú a na iwu na mgbakọ mba na mba ofesi.
Onye ọ bụla, na ala mbak ọrụ iji gbochie ime ihe ike megide ụmụ na-eto eto, na-anọchite anya anyị nkịtị ga-eme n'ọdịnihu na anyị kasị oké ọnụ ahịa akpan owo, na-akwalite ohere agụmakwụkwọ, ohere ahụ ike bụ isi na-elekọta, nchedo, na-elekọta mmadụ nchedo na ihe na-eme gburugburu ebe obibi na emesi ndị na-abụghị ime ihe ike dị ka a ndụ. Peace agụmakwụkwọ nke na-akwalite Nonviolence na mesiri ike na ọmịiko dị ka ebum pụta ụwa àgwà nke mmadụ kwesịrị akụkụ dị mkpa nke usoro mmụta na niile etoju.
Gbochie esemokwu ịda site depletion nke eke ego na karịsịa ka isi iyi nke mmiri na ume, na-achọ States ịzụlite-arụsi ọrụ ike na ulo akwukwo iwu usoro na ụdị raara nye gburugburu ebe obibi-echebe ma na-agba ume na containment oriri ya dabere na inweta ego na ezigbo mkpa mmadụ
Anyị na-akpọ Mba Ndị Dị n'Otu na mba ndị nọ na ya iji kwado ọdịiche dị iche iche agbụrụ, ọdịbendị na nke okpukpe. Ọchịchị ọlaedo nke ụwa na-adịghị eme ihe ike bụ: "Na-emeso ndị ọzọ dị ka ị ga-achọ ka e mesoo gị."
The isi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ngwaọrụ ịmụta a ndị na-abụghị ime ihe ike ụwa na-arụ ọrụ nke onye kwuo uche oru na mkparịta dabeere na ùgwù, ihe ọmụma na nkwa, mụụrụ na ndabere nke itule n'etiti ndị ọzọ, na, ebe kwesịrị ekwesị, na-eburu n'uche na- akụkụ nke ọha mmadụ n'ozuzu ya na ebe obibi dị n'ime ya.
Mba niile, ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu ga-akwadoo mgbalị iji merie mmeghị oke na nkesa nke akụ na ụba ma dozie oke na-ezighị ezi nke na-eme ka ime ihe ike na-eme nri. Ọdịiche na ọnọdụ ndị dị ndụ na-eduga n'enweghị ohere ọ bụla, na n'ọtụtụ ọnọdụ, na enweghi olile anya.
Civil otu, tinyere ruuru mmadụ activists, emegide agha na gburugburu ebe obibi na oru ga-ghọtara na-echebe ka dị oké mkpa ka ewu a nonviolent ụwa dị ka ọchịchị niile ga-ejere ya na ụmụ amaala na ghara emegide. Ọnọdụ a ga-kere aka na-agba ume na òkè nke obodo ọha, karịsịa ndị inyom, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na mpaghara, mba na obodo Filiks n'ụwa nile.
N'itinye ụkpụrụ nke Iwu a, anyị na-echigharịkwute anyị niile ka anyị wee rụkọọ ọrụ ọnụ maka ụwa nke ikpe na-egbu egbu, nke mmadụ niile nwere ikike na-agaghị egbu ya, n'otu oge ahụ, ọrụ agaghị egbu onye obula
Atbọchị Mbinye aka nke ụwa maka enweghị ime ihe ike
para dozie ụdị nile nke ihe-ike anyị na-agba nnyocha sayensị na n'ubi mmadụ na mmekọrịta na mkparịta, na anyị na-agba agụmakwụkwọ, na nkà mmụta sayensị na okpukpe obodo aka ntughari ka a na-abụghị ime ihe ike na ndị na-abụghị igbu ọchụ ọha mmadụ. Debanye n'Akwụkwọ Iwu maka Ụwa na-enweghị Ime Ihe Ike
Ihe Nrite Nobel
Ya Nsọ bụ Dalai Lama
Akwa Bishop Desmond Mpilo Tutu
Ndị Dọkịta Mba Nile Maka Mgbochi nke Agha Nuklia
Kọmitii Ọrụ Amụma America
Office International nke Udo
Ndị na-akwado akwụkwọ iwu:
Obodo nke Cagliari, Italy
Obodo nke Villa Verde (OR), Italy
Obodo nke Grosseto, Italy
Obodo nke Lesignano de 'Bagni (PR), Italy
Obodo nke Bagno a Ripoli (FI), Italy
Obodo nke Castel Bolognese (RA), Italy
Obodo Cava Manara (PV), Italy
Obodo nke Faenza (RA), Italy
Peace Peace, Belfast, Northern Ireland
Njikọ Memory Collettiva, Mkpakọrịta
Withoutwa na-enweghị agha na enweghị ime ihe ike
Ụlọ Ọrụ Ụwa Maka Humanist Studies (CMEH)
Obodo (maka mmepe mmadụ), World Federation
Nkwekorita nke Omenaala, Federationwa
Òtù Mba Nile nke Ndị Na-ahụ Maka Ndị Mmadụ
Association «Cádiz maka ndị na-adịghị eme ihe ike», Spain
Formụ nwanyị maka Change International Foundation, (United Kingdom, India, Israel, Cameroon, Nigeria)
Ulo akwukwo maka udo na ihe omimi, Pakistan
Njikọ Assocodecha, Mozambique
Egwuregwu U udo UISP, Italy
Centro per lo sviluppo okike “Danilo Dolci”, .tali
International Security Institute, USA
Gruppo mberede Alto Casertano, Italy
Mmụta ndị ruuru mmadụ na Mgbakọ na Mgbakọ Ọfụma, Spain
Organisation ndi ntorobịa ndi mmadu, Italy
Athenaeum nke Petare, Venezuela
Icaltù agbụrụ nke CÉGEP nke Sherbrooke, Quebec, Canada
Ndi otu ndi otu nwere onwe na ndi na elekota ndi ezi na ulo (FIPAN), Venezuela
Center Communautaire Jeunesse Unie de Parc Mgbatị, Québec, Canada
Ndi Ochichi nke Maka Surlanahụ ,wa, Canada
UMOVE (Ndị nne United na-emegide ime ihe ike n’ebe ọ bụla), Canada
Transformative Learning Center, Mahadum nke Toronto, Canada
Ndị na-akwalite udo na obi ọjọọ, Spain
Ọ bụ ihe ama:
Maazị Walter Veltroni, Onye bụbu Mayor nke Rome, .tali
Maazị Tadatoshi Akiba, Onye isi ala nke Mayors for Peace na Mayor nke Hiroshima
Maazị Agazio Loiero, Gọvanọ nke mpaghara Calabria, Italy
Prọfesọ MS Swaminathan, Onye bụbu Onye Isi Ọgbakọ Pugwash na Science na World Affairs, Nobel Peace Prize Organisation
Jonathan Granoff, Onye isi ala nke Global Security Institute
George Clooney eme egwuregwu
Don Cheadle, omee
Bob Geldof, onye ọbụ abụ
Tomás Hirsch, onye na-ekwuchitere Humanism na Latin America
Michel Ussene, onye na-ekwuchite Humanism na Africa
Giorgio Schultze, onye na-ekwuchitere Humanism maka Europe
Chris Wells, Ọkà Okwu nke Humanism maka North America
Sudhir Gandotra, onye na-ekwuchitere Humanism na mpaghara Asia-Pacific
Maria Luisa Chiofalo, Onye Ndụmọdụ na Ọchịchị nke Pisa, Italy
Silvia Amodeo, Onye isi oche nke Meridion Foundation, Argentina
Miloud Rezzouki, Onye isi otu ACODEC Association, Morocco
Angela Fioroni, onye odeakwụkwọ mpaghara nke Legautonomie Lombardia, Italy
Luis Gutiérrez Esparza, Onye isi oche nke Latin American Circle of International Studies (LACIS), Mexico
Vittorio Agnoletto, onye bụbu onye omebe iwu nke European Assembly, Italy
Lorenzo Guzzeloni, onye isi obodo Novate Milanese (MI), Italy
Mohammad Zia-ur-Rehman, Onye Nchịkọba Mba nke GCAP-Pakistan
Raffaele Cortesi, onye isi obodo Lugo (RA), Italy
Rodrigo Carazo, Onye bụbu onye isi ala Costa Rica
Lucia Bursi, onye isi obodo Maranello (MO), Italy
Miloslav Vlček, Onye isi oche nke ndị nnọchite Czech Republic
Simone Gamberini, onye isi obodo Casalecchio di Reno (BO), Italy
Lella Costa, Onye omere, Italy
Luisa Morgantini, onye bụbu onye osote onye isi oche nke Ndị Ome Iwu Europe, Italy
Birgitta Jónsdóttir, onye otu omebe iwu nke Icelandic, Onye isi ndị Enyi nke Tibet na Iceland
Italo Cardoso, Gabriel Chalita, Jose Olimpio, Jamil Murad, Quito Formiga, Agnaldo
Timóteo, João Antonio, Juliana Cardoso Alfredinho Penna ("Parliamentary Front for the Accompaniment of the World March for Peace and Não Violência na São Paulo"), Brazil
Katrín Jakobsdóttir, onye Minista Mmụta, Ọdịbendị na Sayensị, Iceland
Loredana Ferrara, onye ndumodu nke Prato, Italy
Ali Abu Awwad, onye na-akwado udo site na ime ihe ike, Palestine
Giovanni Giuliari, onye ndụmọdụ maka obodo Vicenza, Italy
Rémy Pagani, Onye isi obodo Geneva, Switzerland
Paolo Cecconi, onye isi obodo Vernio (PO), Italy
Viviana Pozzebon, onye ọbụ abụ, Argentina
Max Delupi, odeakụkọ na ọkwọ ụgbọ ala, Argentina
Páva Zsolt, onye isi obodo Pécs, Hungary
György Gemesi, onye isi obodo Gödöllő, Onye isi ala nke ndị ọchịchị obodo, Hungary
Agust Einarsson, onye nyocha nke Mahadum Bifröst, Iceland
Svandís Svavarsdóttir, Minister nke gburugburu, Iceland
Sigmundur Ernir Rúnarsson, onye otu omebe iwu, Iceland
Margrét Tryggvadóttir, onye otu omeiwu, Iceland
Vigdís Hauksdóttir, onye otu omebe iwu, Iceland
Anna Pála Sverrisdóttir, Onye otu omeiwu, Iceland
Thráinn Bertelsson, onye otu omebe iwu, Iceland
Sigurður Ingi Jóhannesson, onye otu omebe iwu, Iceland
Omar Mar Jonsson, Onye Isi Obodo nke Sudavikurhreppur, Iceland
Raul Sanchez, onye ode akwukwo ndi ruuru mmadu nke Cordoba, Argentina
Emiliano Zerbini, onye egwu, Argentina
Almut Schmidt, Onye isi Goethe Institut, Cordoba, Argentina
Asmundur Fridriksson, onye isi obodo nke Gardur, Iceland
Ingibjorg Eyfells, Onye isi ụlọ akwụkwọ, Geislabaugur, Reykjavik, Iceland
Audur Hrolfsdottir, Onye isi ụlọ akwụkwọ, Engidalsskoli, Hafnarfjordur, Iceland
Andrea Olivero, Onye isi ala nke Acli, .tali
Dennis J. Kucinich, onye otu Mgbakọ, USA